Heerka Uu Marayo Xiriirkii Jaceyl Ee Ranbir Kapoor Iyo Katrina Kaif Iyo Haddii Uu Soo Hagaagay - Hablaha Media Network
HMN:- Warar xan ah oo soo baxayey ayaa soo jeedinayey inay dib isugu soo laabteen Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif isla markaana ay halkoodii hore ka ambaqaadeen xiriirkoodii jaceyl.
Si kastaba ha ahaatee, warar niyadjab leh ayaa haatan soo baxaya, waxayna sheegayaan in aysan xitaa eegmada isku quurin Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif, iska illoow inay isla hadlaane.
Shaqsi aan la magac dhabin oo ku dhow labadooda ayaa saxaafadda u sheegay: “Wararkaan xanta ah ee sheegaya inay dib isugu soo laabteen Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif gabi ahaanba waa been abuur.
“Bishii January ee horraantii sannadkaan ayuu burburay xiriirkoodii jaceyl. Wixii intaas ka dambeeyey waxay ku kulmeen duubista filimka Jagga Jasoos, xitaa hal eray isma dhaafsan.”
Wararku waxay intaas ku darayaan inay masaafo fog isku jirsadeen Ranbir Kapoor iyo Katrina Kaif haatan. Sababtoo ah 33 sanno jirtaan Katrina ayaa ka guurtay daartii ay sida wadajirka ah ugu noolaayeen iyada iyo RK ee ku taallay Carter Road, waxayna ku laabatay gurigeedii hore oo ku yaalla Waterfield Road.
Intii lagu jiray xafladdii ciidda Diwali ee ka dhacday guriga Anil Kapoor, Ranbir iyo Kat isku waqti ayey yimaadeen laakiin laba gees ayey kala istaageen iyadoo mid kasta bartanka kaga jiray asxaabtiisa. Xaqiiqada ayaana ah in Katrina aysan xitaa daawan filimkii ugu dambeeyey ee Ranbir Ae Dil Hai Mushkil.
Warar dheeraad ah ayaa intaas ku daraya in Katrina iyo Ranbir oo 10kii cisho ee ugu dambeysay duubayey filimkooda Jagga Jasoos ay si aad ah uga careysan yihiin qaabka ay saxaafaddu diiradda u saartay xiriirkooda jaceyl ee fashilmay.